Uncategorized Archives - Page 2 sur 2 - FJKM Québec - Canada
Editorialy aprily 2019 Hazöny ny famonjen’ny Tompo
1 avril 2019 by Njaka Ramanandafy
Hits: 203EDITORIALY Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana aprily 2019 nomeny antsika ity indray. “Hazöny ny famonjen’ny Tompo” Mila hazonina ny famonjena nomena antsika maimaim-poana fa sao sanatria votsotra indray. Ary indreto misy fomba tsotra vitsivitsy hihazonana izany famonjena izany. Ataovy matanjaka ny finoanao raha tianao ny hihazona ny famonjena satria tsy maintsy mino […]
Fankalazana ny Noely, taona 2018
9 janvier 2019 by Bako Raveloson
Hits: 465“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6
9 desambra 2018 – Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady
16 décembre 2018 by Bako Raveloson
Hits: 363« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2
06 mey 2018 : Fanokanana Diakona teto amin’ny FJKM Québec
24 mai 2018 by Bako Raveloson
Hits: 311Tontosa soa aman-tsara ny alahady 6 may 2018 lasa teo, teto anivon’ny fiangonana FJKM Québec, ny fanokanana ireo Diakona mianadahy. Miisa ho 12 zany zao ny isan’ny Diakona eto amin’ny FJKM Québec. Mirary azy ireo ahatontosa ny adidy napetraky ny Tompo eo aminy isika ary mitrotro azy ireo am-bavaka. ” Miorena tsara, aza miova, […]
Fiantsoana katekomena 2018
31 janvier 2018 by Bako Raveloson
Hits: 170Misokatra ny fisoratana anarana ho an’izay liana
9 novembre 2016 by Njaka Ramanandafy
Hits: 132Miarahaba, Raha sendra misy ny tsy fahatomombanana ara-teknika na fahadisoana tsipelina eny anelanelan’ireo pejy samihafa dia aza misalasala manoratra amin’ny Administrateur ny site web. Raha misy ihany koa ny soso-kevitra sy fanatsarana dia misokatra ho antsika rehetra ny varavarana fandraisana azy ireny. Farany sady lehibe indrindra dia isaorana ianao mitondra am-bavaka ny fanamboarana sy ny […]
26 Oktobra 2016 – Hafatry ny Foibe FJKM
28 octobre 2016 by Njaka Ramanandafy
Hits: 114Hafatry ny Mpiandraikitra FOIBE (MF01/SLXVIII)19 – 26 Oktobra 2016 – CFD Ampandrana « Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » (II Tim.1/8a) Ry havana, Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Ny Filoha sy ny Mpiandraikitra Foibe FJKM, izay nanatanteraka ny fivoriany ara-potoana voalohany […]